Theresa May oo taageero ka heshay xisbiga DUP si ay usoo dhisto xukuumad - BBC News Somali
Image caption Theresa May iyo Arlene Foster oo kala hogaamiya labada xisbi
Xisbiga Democratic Unionist Party ee loo soo gaabiyo DUP ee waqooyiga Ireland ayaa ku dhawaaqay in uu ogolaaday heshiis lagu taageerayo xisbiga muxaafidka si loo soo dhiso xukuumad.
Ra'iisul wasaare Theresa May ayaa doorashadii ka dhacday dalka UK ku guul-dareysatay inay hanato sideed kursi si ay u hesho aqlabiyada barlamaanka, waxayna taasi sababatay inay taageero ka dalbato xisbiyada yarryar.
Aqalka looga arrimiyo dalka UK ee Downing Street ayaa sheegay in fahfaahinta heshiiskani looga hadli doono kullan ay golaha wasiirada yeelan doonaan maalinta isniinta, waxaana heshiis walba oo la gaaro uu dhaqan gelin doonaa marka dib loo furo barlamaanka dalkaasi toddobaadka soo socda.
Heshiis walba oo la gaaro Waxaa la sheegay in aysan ka dhigneyn isbaheysi buuxa oo ay wada galaan labada xisbi ee kala ah DUP iyo xisbiga Conservative-ka, balse ay tahay heshiis xisbiga DUP uu ku taageeri doonaan xisbiga muxaafidka arrimo ay kamid yihiin misaaniyada dalka.
Afhayeen u hadlay dowlada na waxaa uu sheegay in ay soo dhaweynayaan talaabadani oo uu sheegay in ay dalka oo dhan u horseedi doonto xasilooni iyo deganaansho oo ay ugu horeyso ka bixida midowga Yurub.
Theresa May ayaa rajeynaysay in doorashada xilligeeda laga soo hormariyay ay ku xoojin doonto awoodda xisbigeeda, balse taa bedelkeeda waxa uu xisbiga lumiyay qaar ka mid ah kuraastii uu ku lahaa baarlamaanka.
Tafaftiraha arimaha siyaasadda ee BBC ayaa sheegaya in Theresa May ay noqon doonto ra'iisul wasaare aan awood badan lahayn, ayna dhici karto in muddo kooban ay xilka hayso.
Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee labour-ka, Jeremy Corbyn, oo uu xisbigiisa kuraas badan oo dheeraad ah ka helay doorashada, ayaa ugu baaqay ra'iisul wasaare May in ay iscasisho.
Ra'iisul wasaaraha ayaa xaqiijisay in wadaxaajoodka muhiimka ah ee ku aaddan sidii uu dalkeeda uga bixi lahaa Midowga Yurub, ay billaaban doonaan xilliga loogu talagalay oo ah 19-ka bishan.